Ny sabotsy lasa teo, no naharay fitarainana mikasika ny herisetra ara-nofo mianjady amin’io zaza tsy manan-tsiny io ny polisim-pirenena ka nanokatra fanadihadiana avy hatrany. Fantatra tamin’izany fa tamin’ny Alatsinainy 03 aogositra teo no nanaovan’ilay Rangahy ny asa ratsiny. In-telo naolany ilay zaza rehefa lasa tany an-tsaha nitady sakafo ny Reniny. Notambazany vola avy eo ary norahonany tsy hilaza na amin'iza na amin'iza ny habibiana vitany. Gaga anefa ilay renim-pianakaviana tafaverina avy an-tsaha nahita vola teny an-tanan-janany. Tsy naharitra ity farany fa nanontany ka nitantara ny zava-nitranga ilay zaza rehefa nanontaniana. Nosamborina ilay nahavanon-doza ary natao famotorana ka niaiky ny habibiany sy ny heloka vitany. Afak’omaly ihany dia naiditra am-ponja izy.